Ọpụrụiche Vita ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Pụrụ iche vita bike review - viable ngwọta
Pụrụ iche vita bike review - viable ngwọta
Ọpụrụiche Vita ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
IheVita pụrụ icheEzubere ka ọ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma maka geometry ahụ nwanyị, nke pụtara enweghị ọnọdụ ịgba ịnyịnya. Onwere uzo ogugu di iche na ebe di nkpa. Iheigwe kwụ otu ebesitere na A1 Premium Aluminom ma o siri ike ma na-anabata ya, kamakwa ọfụma.Sep 10 2018
Ndị okenye PT igwe kwụ otu ebe anyị na-ele anya na Vitathis ọkachamara nke 2012 bụ igwe kwụ otu ụzọ maka ụmụ nwanyị anyị kwurula banyere ha na mbụ gbasara ụdị egwuregwu Cirrus nke nzube a na igwe kwụ otu ebe a yiri nke a, ọ bụ ngwakọ n'okporo ámá ma ọ bụ igwe ịgba ọsọ na-agba ọsọ Ọ na-adịrị gị mfe ịnya ụgbọ ala ka ọ dịrị ọsọ ọsọ maka ọtụtụ ọnọdụ dịgasị iche iche nke ọma n'afọ a, a ga-akwụ ụgwọ pụrụ iche maka ihe omume 8 ihe abụọ bụ karama abụọ nke ụmụ nwanyị Vita, nke a bụ ọkwa-na etiti ya mere nwere nnukwu obere nguzo dị elu mmadụ nwere Nsogbu na ịnya igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ha nwere nchegbu gbasara onye ga-ewepu igwe kwụ otu ebe, kwụsi ike ngwa ngwa site na kichin igwe kwụ otu ebe, nke na-enye ha nchekwa ịnyagharị igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ enwere veto ọkọlọtọ. na a ogologo n'elu ka N'agbanyeghị nwere ndo n'elu ndị nwoke akara n'elu kwaa ebe e wezụga ụfọdụ tube shaping mmelite na L. Lightweight nwetara ọhụrụ sadulu na ya. A otutu anya ugbu a na-akwụ ụgwọ ndịna na ndị a anyịnya igwe otú i nwere ike ịhụ na agba kenha nke igwe kwụ otu ebe maka onwe gị Genta ejiri ya na kenha n'ọnyá na etiti ute ruo oche post olu akwa na mgbe ahụ karịsịa ebe ọ bụ na e nwere ugbu a a ọnụ ọgụgụ nke ngwa na-eme ka kwekọrọ na igwe kwụ otu ebe gị nke dabara na njedebe nke afọ, ha ga-adaba uwe aka, jikọtara ọnụ, nha nha dị oke agba egwuregwu na igwe kwụ otu ebe a mara ezigbo mma dị ka taya taya nke igwe nimbus anyị kwuru maka ya tupu ịme nnukwu ihe ngosi Designs mere igwe kwụ otu ebe nwere ụgbọ okporo ígwè 24, ọsọ 24 nwere ike iyi ihe na-eyi egwu nye onye na-agbabataghị igwe kwụ otu ebe n'oge, mana o nwere ụfọdụ uru dị iche na mgbe ịlele na nke a bụ gia na-enweta gị, ị ga-eweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu ọ bụla. , ọ bụ ihe dị nnọọ ala na ndị ọzọ yiri mgbaaka na-ezo dị ka ngwa ngwa sliders na ngwa ngwa ọkụ n'ihi na ọ bụ ntabi ntanye na ị nwere ike ịgbanwee na-agbaji na-enweghị mgbe na-akpụ akpụ gị aka, ihu ọma aka gị na-adabere na Irv ingon, na ike aka anyị nwere abụọ ma ọ bụ atọ mkpịsị aka na breeki lever nwere gị isi mkpịsị aka na otu nke gia levers na gị ndeksi mkpịsị aka na ya mere na ọ bụ a push-sere edinam na akwusila na yinye na-adị mfe gia na azụ ebe ịdọpụ eriri USB na-enye gị ihe siri ike gia ngwa ngwa azụ na n'ihu aka nri dị nfe dị mfe, yabụ na mgbakwunye na ihe ndị a n'ihi imewe nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe, anyị nwere ọtụtụ gia dị mfe iji ezigbo brekị anyị nwere agbanweela cantilever brek, nke a na - akpọ bbrakes mgbe ụfọdụ, ha anaghị apụ apụ dị ka mgbochi ochie cantilever brek, yabụ anaghị ejide ha, mana ha na - arụ ọrụ ọfụma na ha achọghị ike dị ukwuu, iji kwụsị igwe kwụ otu ebe mfe lezienụ anya na ha ga-adị ọcha na igwe kwụ otu ebe niile dị mma nke ịnwere ike ịgba ọsọ dị ka ịchọrọ ma ọ bụ ogologo oge ị dị
Gịnị bụ ọkachamara Vita?
Ejiri A1 Premium Aluminom mebere ya gburugburu nke ọma na ịrụ ọrụ nke ọma Women'smụ nwanyị Fitness Geometry iji nyefee ezigbo nkasi obi na njikwa ka ị na-arụ ọrụ ọsụsọ…Ndụ.Mar 13 2020
Pụrụ ichebụ n'eluemeputa igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị gafere aPụrụ iche igwe kwụ otu ebe, ndị mmadụ ga-eji ụjọ na-ele gị anya. Mgbe ị na-azụta aPụrụ iche igwe kwụ otu ebe, ị maara ihe ị ga-atụ anya ya. Nke a bụ ngwaahịa dị mma, nkwado ndị ahịa mara mma, yana akwụkwọ ikike ngwaahịa ama ama.
Ka anyị kwuo maka ụlọ ọrụ pụrụ iche Comp 29 Rockhopper. Anyị nwere obi ụtọ banyere ịgagharị, anyị nwere obi ụtọ maka ihe ndị a na-eme n'èzí, yabụ anyị kwubiri na nke a ga-abụ afọ anyị kwesịrị ịnwale ịnyịnya igwe, ma ọ bụrụ na ị maghị, ahịa 2020 na-ere ahịa igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe enweghị igwe kwụ otu ebe. rere ya n'oge opupu ihe ubi ma nke ahụ anaghị eme mgbe niile n'ihi ya ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ dị egwu na onye ọ bụla kpebiri na anyị na-arapara na-eme ihe dị na mpaghara, gịnị ka anyị ga-eme? anyị wee sị na anyị ga-emefu ihe dịka $ 1,000 na igwe kwụ otu ebe a.
Kedu ihe nke ahụ na-ewetara anyị? Ya mere, mgbe ị nyochachara m, $ 1,000 Canada ga-enwetara gị igwe kwụ otu ebe na - akwụsịtụ, ma ọ bụrụ n’ịchọta ihe nwere nkwarụ okpukpu abụọ, ọ nwere ike ọ gaghị akacha mma. Ga-achụ àjà n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ maka ọnụahịa ahụ. Don'tkwesighi imefu ego buru ibu maka onye mbido amatachaghi m ihe ọ na-akpọ igwe kwụ otu ebe a, mana ọ nwere naanị otu gia n'ihu, ị nwere itoolu zuru ezu na azụ, yabụ ọ bụ 9-ọsọ igwe kwụ otu ebe na na ntụnyere, ọ bụ n'ezie ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma eleghị anya ọ bụghị dị ka n'oge a, mana maka m dị ka nwatakịrị ọ bụ ihe a na-ahụkarị inwe ọtụtụ gia na n'ihu na ọtụtụ gia na azụ, dịka ọmụmaatụ nweta njikọ 27 mgbe ugwu na-agba ịnyịnya atọ n'ihu n'ihu don't adịghị mkpa nhọrọ 27 dị iche iche, mana ihe dị m mkpa bụ na mgbe ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ụbụrụ gị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. ihe ụbụrụ gị na-eche banyere oge niile dị n'okporo ụzọ ga - eche, ma echere m na aka nri gị bụ onye na - ahụ maka ịgbanwee ka ọ pere mpe, mana ọ bụ n'ezie nnukwu ihe ị na - achọghị iche banyere, aka ekpe gị bụ aka ekpe gị Gị n'ihu breeki na nke ahụ bụ ihe niile ị na-eji maka ya.
Ọmụmaatụ, nke a bụ aka nri gị, ị nwere breeki azụ gị ma nwee gia aka gị na nke a bụ naanị gia aka gị na igwe kwụ otu ebe nke ahụ dị mma, ị nwere mkpịsị aka gị na-akpalite na mkpịsị aka gị iji bulie ụgbọala iji kwalite. Ihe ọzọ dị mma nke ọma bụ sistemu mgbanwe na-abịa na sistemụ na-agbanwe agbanwe ma nwa amadị na ụlọ ahịa ahụ kọwara na ọ bụ m ka edoziri m na Comp 29, ọ bụghị naanị na ọ na-agbanwegharị gị, akụkụ azụ nke ọ na-eme ka agbụ gị dị n'ahịrị na n'ụzọ ụfọdụ dịka ụfọdụ igwe kwụ otu ebe, mgbe ị gbanwere mgbatị ọ ga-emetụta akụkụ nke agbụ ahụ na-aga n'ihu n'ihu azụ na nke ahụ nwere ike itinye nsogbu na agbụ gị na, esemokwu ọnọdụ, n'ezie tinye ya ime ka gị yinye gbajie. M na-enwe mmasị na taya ndị a, azụ na ihu bụ ụzọ abụọ dị iche iche o mere ha kpọmkwem maka azụ na traction n'ihu na ịkwụsị traction Otu ihe dị mma iji buru n'uche ndị na-atụ ụjọ bụ na ị na-ekpochi ha mgbe ị 'na-agbali ịrịgo nnukwu ugwu ma ọ bụ na-ejigidekwu ọsọ, ihe na-emetụta ujo n'ihu na-etinye ego nke nwere ike iwepụ ụfọdụ ọsọ gị, yabụ ị nwere ike igbochi onye na-awụ akpata oyi n'ahụ mgbe ị na-anya ụgbọ ala nke na-abụghị dị nnọọ bumpy n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịrị ugwu nke ọma ma ọ bụ na-ejigidekwu ọsọ ka ị na-agbagharị gburugburu obodo, na n'ikpeazụ, maka igwe $ 1,000, ị nwere ike ịtụ anya inwe breeki diski.
Are dị ezigbo mkpa. M ga-atụ aro na ọ bụrụ na ị na-achọ igwegharị igwe gị nke mbụ ma ọ dịkarịa ala gbaa mbọ hụ na ị ga-enweta breeki diski n'ihi na ọ bụrụ na ị kpebie ịgbada n'okporo ụzọ ugwu, ị ga-achọ ha ma ọ bụghị naanị breeki azụ gị ka m hụrụ na ị na-agbadata ugwu Ride, nke na-enweghị ọtụtụ traction. Na-agbadata na brek abụọ ahụ iji jide n'aka na ị ga-abanye n'ime osisi.
Zụrụ ihe ndozi. Nwere ike ịga ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ịga na ntanetị na Amazon wee nweta ụfọdụ Buyzụta akụrụngwa nke ga - enyere gị aka ịrụzi igwe kwụ otu ebe gị na ọnọdụ ụfọdụ Ihe kachasị mkpa bụ nzụta, ọ dị ka ngwa ọrụ ụwa niile ma ọ nwere ọtụtụ Allen igodo, O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ga - enyere gị aka ịrụzi gia gị, mezie breeki gị ka ị rụzie ihe ndị ọzọ nwere ike ịnwe nsogbu na ha mgbe ị na - anya ụgbọ ala, ọ bụrụ na ị nọ n’etiti ụzọ ugwu, e Fụọnụ gị taya na enweghị ụzọ idozi ya na ugbu a ị na-eje ije 15 kilomita azụ ụgbọ ala gị dị ka ị na-achọghị ka ị na-eme ya naanị Chọpụta, ọ bụrụ na m nwere ike ikwu na ọ bụ nkwanye, ọ bụ na ị nwere obere akụkụ mmezi ndị a. Yabụ ọ bụrụ na ịrapara na rapaara, ịnwere ike idozi igwe kwụ otu ebe gị ma gbaa ma ọ bụ pụọ.
Y’oburu n’ichoputara aka, dicha ya ma denye aha gi. dị ka ks maka ikiri! Ee, m wepụrụ nke ọma. hahaha na eme ka ndi nile noir nout noises mara na mgbe ihe ojoo meruru gi aru buy a helmet oh yeah! Nweghị ike ịzụta ihe na-ezighi ezi ịzụta site na nnukwu ika dịka Spezalized
Ọpụrụiche Vita ọ bụ ụgbọ ịnyịnya ụmụ nwanyị?
IheVita pụrụ ichebụ ọnụ dị mmaigwe kwụ otu ebenke na-enye arụmọrụ siri ike na nhazi omenala nke zuru oke makanwanyindị na-agba ịnyịnya ígwè chọrọ karịa naanị runaround dị ọnụ ala iji nweta ha site na A ruo B.
Olee ụdị ịnyịnya ígwè bụ ọkachamara Vita?
IheVita pụrụ icheWomens ngwakọIgwe kwụ otu ebe2016 na-ewere ihe eji emepụta site n'okporo ụzọ ọdịnalaigwe kwụ otu ebeimewe yana okpokoro mmanya ịkeanyịnya igwe, na-arụpụta ụdị ọmarịcha ntụsara ahụ na ntụkwasị obi ịnya ịnyịnya nke dị n'ụlọ n'okporo ụzọ ọ bụla n'ebe ahụ.
Ngwurugwu ndị ọkachamara pụrụ iche ọ ka mma karịa ibu?
Pụrụ iche anyịnya igwedị oke ọnụ karịa n'ozuzu ha ma na-enyekarị akụrụngwa dị elu dị elu.Nnukwuawade ọtụtụanyịnya igwena mpaghara niile, njedebe ha dị ala na etitianyịnya igwena-abụkarịmma karịaasọmpi ahụ.
Specializedlọ igwe kwụ otu ebe dị mma karịa Trek?
Enweghị onye mmeri doro anya. Ha abụọ na-enye otu iheanyịnya igwena akụrụngwa n'otu ụdị ọnụahịa ahụ.Mee njemnwere wider dịgasị iche iche nkeanyịnya igweịhọrọ site n'iji ya tụnyerePụrụ iche. Na nbanye, ị ga-enweta ntakịrịmmaakụkụ mgbe ị na-agaPụrụ iche.
Kedu ihe ka mma ma ọ bụ Trek?
Pụrụ icheigwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ karịa n’ozuzu ha mana ha na-enyekarị akụrụngwa dị elu n’elu elu.Nnukwuawade ọtụtụ anyịnya igwe na niile àmà, ha ala ọgwụgwụ na ufọt ufọt igwe kwụ otu ebe bụ mgbemma karịaasọmpi ahụ.
Ebee ka ọkachamara Vita egwuregwu 2017 Womens ngwakọ igwe kwụ otu ebe?
Nabata na ekele maka ịkwụsị site na nyocha anyị banyere Vita Sport 2017 Womens Hybrid Bike pụrụ iche, iji gụọ nyocha ndị ahịa anyị ekwenyela pịa pịa bọtịnụ dị n'okpuru iji bido. Pụrụ iche Vita Sport 2017 Womens Hybrid Bike Ranks nọmba 403 nke 450 na ngwakọ Ngwakọ Ngwakọ na Evans Cycles na nyocha a.
onye na eme igwe fuji
Kedu ụdị taya ndị egwuregwu Vita pụrụ iche nwere?
Vita bụ ọkachamara nke aluminom, nke na-arụ ọrụ, ngwa ngwa na-aga n'okporo ụzọ / ahụike. Site na taya slicker, Vita dị ọtụtụ n'ụlọ na Tarmac mana ọ ga-eji obi ụtọ gboo ụzọ ọkụ n'okporo ụzọ dịka ụzọ ụgbọ ala na ụzọ dị mma.
Kedu ụdị etiti Vita nwere?
Ogwe osisi aluminom ya kachasị mma na Geometry Fitness nke nwanyị na-anapụta mmetụta dị oke mma nke njikwa ntụsara ahụ ka ị na-arụ ọrụ ọsụsọ, ebe akụkụ dị mma yana ogo dị mma yana nkasi obi site na Isi kọntaktị Isi Geometry, hụ na njem ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi.